လေ့လာမှု - လိင်မတူသောအပြုအမူသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသလား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆက်နွယ်မှုနှင့်ဇီဝဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွင် (2015) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
လေ့လာမှု: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမှန်တည်သလား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေး, နှင့်လက်တွေ့ဆက်တင် (2015) တွင် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဇီဝဗေဒဆက်စပ်မှု
မှတ်ချက် YBOP: ဒီလေ့လာမှုမှာ compulsive masturbators သည်အခြား ED လူနာများထက်အသက်ငယ်ပြီးပိုပြင်းထန်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့သည်။ ယနေ့လူငယ်များအနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဆက်စပ်မှုရှိမည်မှာသေချာသည် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကုသမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာတို့နှင့်ဆက်နွယ်သည်။. လေ့လာမှု၏နိဂုံး:
Castellini, G. အ1; Corona, G. အ2; Fanny, အီး3; Maseroli, အီး4; Ricca, V.5; မဂ္ဂီ, အမ်4
1တက္ကသိုလ်က ; Florence, စမ်းသပ်, CL, အီတလီ၏ဦးစီးဌာန 2ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်ယူနစ်, Bologna, အီတလီ, 3Careggi ဆေးရုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့် Andrology, Florence, အီတလီ, 4လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့် Andrology, Florence, အီတလီ, 5စိတ်ရောဂါယူနစ်, Florence, အီတလီ
Objective: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏လက်တွေ့ setting ကိုအတွက် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (CM) ၏ပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်သုခချမ်းသာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ CM များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
နည်းလမ်းများ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဘို့ငါတို့ Andrology နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပြင်ပလူနာဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်း 4,211 ယောက်ျား၏တစ်ဦးကဆက်တိုက်စီးရီး Erectile အလုပ်မဖြစ် (SIEDY), ANDROTEST နှင့်ပြုပြင်ထားသော Middlesex ဆေးရုံမေးခွန်းလွှာပေါ်တွင်ပုံစံချထားသောအင်တာဗျူးအားဖွငျ့ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ CM ၏ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ပြင်းထန်မှုတစ် Likert စကေး (0-3) တွင်တိုင်းတာအဖြစ်အပြစ်ရှိအောက်ပါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖြစ်စဉ်များ၏ကြိမ်နှုန်း၏သင်္ချာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်စဉ်းစား, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့နှင့် ပတ်သက်. SIEDY ပစ္စည်းများသည်နှင့်အညီသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: မြေတပြင်လုံးနမူနာအတွင်း 352 (8.4%) ဘာသာရပ်များတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းအပြစ်ရှိကြောင်းမဆိုအသိကဖော်ပြခဲ့သည်။ CM ဘာသာရပ်များအတွက်နမူနာ၏ကျန်ထက်အသက်ငယ် ရှိ. , ပိုပြီးစိတ်ရောဂါ comorbidities ပိုပြီးမကြာခဏဆို CM ရမှတ်သတင်းပို့ဘာသာရပ်များအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်ပြသခဲ့သည်။
CM ရမှတ်အပြုသဘောပိုမိုမြင့်မားအခမဲ့-floating အတူဆက်စပ်ခဲ့သည် (p <0.001) နှင့် somatized စိုးရိမ်ပူပန် (p <0.05) အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူ (p <0.001), ပိုမိုမြင့်မားသော CM ရမှတ်နှင့်အတူဘာသာရပ်များလျော့နည်း phobic စိုးရိမ်စိတ်အစီရင်ခံနေစဉ် (p <0.05), နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive လက္ခဏာတွေ (p <0.01) ။ ပိုမိုမြင့်မားသော CM ရမှတ်သည်မြင့်မားသောအရက်သောက်ခြင်း (p <0.001) နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
CM ဘာသာရပ်များသည်မိတ်ဖက်၏အနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း (p <0.0001) နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းစိုက်ထူမှုရရှိရန်ပိုမိုပြproblemsနာများ (p <0.0001) ကိုပိုမိုမကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်။ CM ပြင်းထန်မှုသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့် relational (SIEDY Scale 2) နှင့် intrapsychic (SIEDY Scale 3) domains များ (p <0.001) အားလုံးနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်းအော်ဂဲနစ်ဒိုမိန်း (SIEDY Scale 1) နှင့်အဘယ်သူမျှမပတ်သက်ပါ။
နိဂုံး: Clinician တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ setting ကိုအတွက်ကုသမှုရှာကြံအများအပြားဘာသာရပ်များ, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့ကြောင်းအကောင့်သို့ယူသင့်ပါတယ်။ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဒီအခြေအနေနှင့်အတူဘာသာရပ်များအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများအဆင့်မြင့်နှင့်လူ့ဆက်ဆံရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုအပေါ်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုပေးထား, မသန်စွမ်းတစ်ဦးဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းမရှိကိုယ်စားပြုသည်။